Izimpaphe zika-UK zokulala zikanokusho zimane zazama ukumbulala - BGR - Tamban RELAY
Accueil » ISAYENSI Izimpaphe zika-UK zokulala zikanokusho zimane zazama ukumbulala - I-BGR
Lapho indoda esikhulile yaseBrithani eneminyaka eyi-43 iguquka isuka embhedeni wokwenziwa iye kwizicamelo ne-duvet enhle kakhulu, yalinda ubusuku obukhulu. Esikhundleni salokho, welashwa izinyanga ezinezinkinga zamaphaphu ezamshiya enesiyezi futhi edidekile. Icala lakhe yisihloko sengqephu entsha ku Imibiko ye-BMJ Case .
Ngokusho kombiko, le ndoda ibizohlaselwa yisifo esingajwayelekile odokotela abakubiza ngokuthi “i-feather-down lung”. Yigama eliyisiwula.
njengoba Gizmodo inothi Izimpawu zalo mlisa zazingezimbi, zishiya umnyango uvulekele izimbangela eziningi ezingaba khona. Odokotela bangenze izivivinyo eziningana, ekuqaleni basola ukuthi kungenzeka kutholakale ukuthi kunesifo samaphaphu. Ngokuhamba kwesikhathi, impilo yakhe iye yawohloka kangangokuba ngisho nokuhamba isikhashana kwamkhathaza.
Amaphaphu anezinhlobo uhlobo lwesifo samaphaphu okuthiwa i-hypersensitivity pneumonitis. Akuwona wonke umuntu ozwelayo, kepha labo abathola ukuthi amaphaphu abo athukutheliswa uthuli oluncane olutholakala ezinsiba zezinyoni. Kulokhu, imicamelo ye-duvet ne-feather yale ndoda yakhiqiza izinto ezanele zemicroscopic futhi, njengoba yayilala ebusuku, amaphaphu akhe akhokha inani.
Isimo sivame ukubonwa kubantu abasebenza nezinyoni ingxenye yomsebenzi wabo noma njengento yokuzilibazisa. Odokotela bebengenasizathu sokusola ukuthi le ndoda ibinothando olufanayo ngaphambi kokufunda ukuthi babethenge, benomkakhe, nombhede omusha wensimbi. Ukuhlolwa kwelebhu okwalandela kwaba kuhle kwe-hypersensitivity pneumonitis.
Izindaba ezimnandi ukuthi lesi sifo singasuswa kalula futhi lapho nje indoda isilahlile umbhede omusha, impilo yakhe iba ngcono ngokushesha. Odokotela bamnikeze ama-steroid ukuthi athuthukise impilo yakhe - i-jury namanje ayazi ukuthi ama-steroid ayasiza yini ezimweni ezinjalo - futhi amaphaphu akhe atholakala kungakapheli nonyaka.
Umthombo Wesithombe: Richard Gardner / Shutterstock
KALULA nje, i
UTeri Hatcher wembula umzimba wakhe wamaphupho eminyakeni eyi-55: "Ngizizwa ngikhululekile"
I-India: UJafri akazange angibize: Modi epaneli | India News
Iphephandaba le-21 likaDisemba 11 2019 - VIDEO
ABANTU & LIFESTYLE8,636